Author Topic: ဟာသဥာဏ်စမ်း အမေး/အဖြေ (Read 165658 times)
« Reply #240 on: September 01, 2011, 12:34:54 PM »
Quote from: Nuclear Dragon on August 29, 2011, 04:54:17 PM
Quote from: ဖရာရှက် on August 29, 2011, 03:55:04 PM
တစ်. Hand in Hand. လက်ထဲ လက်ထဲ မှာ
နှစ်. That in hand. ဒါ လက်ထဲမှာ ပဲ
သုံး. Hand in that. ဒါ လက် အထဲမှာ
လေး. That in that. ဘာလဲဟင် ?
ဒါ ways to enjoy love ပေါ့ဗျား
« Reply #241 on: October 02, 2011, 10:15:02 AM »
« Reply #242 on: October 02, 2011, 10:32:52 AM »
ပုံလေးနှစ်ပုံရှိတယ် အဲ့ဒီထဲမှာ မတူတာလေးတွေရှာပေးပါ
« Reply #243 on: November 12, 2011, 12:43:56 PM »
၁၊ ဒဿဂီရိ ခေါင်းလျှော်ရင် ဘယ်ခေါင်းကို အရင်စလျှော်မလဲ။
၂။ လပ်ချမီး မယ်တော် အိမ်သာတတ်ရင် ဘယ်လက်နဲ့ အီအီးကုန်းမလဲ..။
၃။ မဟာပိန္နဲနတ် ဗိုက်ဆာရင် ဘာစားမလဲ။ ကြံလား။ ချာပါတီလား။
၄။ တပေါင်းလပြည့်နေမှာ နွယ်မြက်သစ်ပင် အကုန်ဆေးဖက်ဝင်တယ်ဆိုရင် စည်ပင်ကော ဆေးဖက်ဝင်လား။
၅။ သေမင်းသေသွားရင် ဘယ်သူက သူ့နေရာကို ဆက်ခံမလဲ။
၆။ ကျန်စစ်သားနဲ့ ရှောင်လင်ဘုန်းကြီး သိုင်းပြိုင်ရင် ဘယ်သူနိုင်မလဲ။
၇။ မိုနာလီဇာ ပန်းချီကားမှာ မျက်ခုံးမွေးမပါတာ မေ့ကျန်ခဲ့တာလား။ ဒါမှမဟုတ် သက်သက်မဲ့လား။
၈။ မဟော်သဓာနဲ့ ပေါင်ချိန် ဘယ်သူက ဥာဏ်ပိုကောင်းလဲ။
၉။ ဇနကနဲ့ ညောင်ဦးဖီး ရေကူးပြိုင်ရင် ဘယ်သူနိုင်မလဲ။
၁၀။ ဘင်လာဒင်နဲ့ ကနောင်မင်းသား ဘယ်သူက ဖောက်ခွဲရေးပိုတော်လဲ။
၁၁၊ ဟယ်ရီပေါ်တာနဲ့ မာရ်နတ်နဲ့ပညာပြိုင်ရင် ဘယ်သူနိုင်မလဲ။
« Reply #244 on: November 17, 2011, 02:17:01 AM »
Quote from: cyberzeus on June 27, 2011, 11:57:40 AM
ထိပ်ဖူးက ကြီးတယ်. . .အချောင်းကတော့ သွယ်သွယ်ဘဲ. . .ပျော့ပျော့စိစိနဲ့. . .အဖြူလည်း ဖြစ်နိုင်သလို အညိုရောင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်. . .လူတွေက ပါးစပ်ထဲကို ထည့်တယ်. . ဘာလဲ?
« Reply #245 on: November 18, 2011, 03:18:17 PM »
အဖြေ။ ရေဇလုံကို ဆေးပါ။
« Reply #246 on: November 30, 2011, 05:26:56 PM »
ကဲ..ဟာသဉာဏ်စမ်းတော့မဟုတ်ဘူးဗျာ. ဒါပေမဲ့ ဖြေကြည့်ပါ .. ။ ကျနော် ဒေါက်တာဆိုက်ကို ဆီမှာလည်း အကူအညီ
တောင်းထားပါတယ်..။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်လည် သုံးသပ်လို့ ရအောင်ပါ..။
၁။ တစ်စုံတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကို စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေတယ်ဆိုရင်....
( က ) လုံးဝကို လှည့်မကြည့်တော့ဘူး ။
( ခ ) ဒေါသကို ထိန်းထားလိုက်မယ်..။ သူ ဘာကြောင့် ဒီလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတာ တွေးကြည့်မယ်..။
( ဂ ) ဘာမှ မပြောဘူး..။ ဒါပေမဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို သိသွားအောင် လျှောက်ပြောလိုက်မယ် ။
၂။ [color] တစ်ယောက်ယောက်က ကိုယ့်ကို နှိမ်ပြီး ဆက်ဆံမယ် ဆိုရင်....[/color]
( က ) ဒေါသတစ်ကြီးဖြစ်မယ် ။
( ခ ) တကယ်မှ မဟုတ်တာပဲ ဆိုပြီး ဥပက္ခာပြုလိုက်မယ် ၊ ပုံမှန်အတိုင်းပဲ ဆက်ဆံမယ် ။
( ဂ ) ခဏတော့ ခါတိုင်းလိုပဲ ခေါ်ပြော ဆက်ဆံမယ်..၊ ဒါပေမဲ့ သူ့ ကို ဝေးဝေးကရှောင်မယ် ၊ တတ်နီုင်ရင်
လုံးဝ မဆက်ဆံတော့ဘူး ။
၃။ အကြောင်းကိစ္စ တစ်ခုခုကြောင့် ကိုယ်သိပ်ပြီး စိတ်ညစ်ညူးနေရတယ် ဆိုပါတော့ ....
( က ) လူတိုင်းကိုပြောမယ် ၊ သူများတကာ ဂရုဏာသက်လာအောင်လို့။
( ခ ) အကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့ နည်းလမ်းကို ဆုံးဖြတ်မယ် ၊ စိတ်ကိုထိန်းပြီး ပုံမှန်အတိုင်းနေသွားနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ် ။
( ဂ ) ဘယ်သူ့ ကိုမှ အရေးတယူ ပြောမနေပါဘူး..။
၄။ စိတ်ပျက်လက်ပျက် ဖြစ်တဲ့အခါ....
( က ) သူများတကာတွေကို ရင်ဖွင့်ပြောပြမယ် ။
( ခ ) ဖြစ်တတ်တဲ့ သဘောပဲလေလို့ဖြေသိမ့်မယ်.။
( ဂ ) ကံဆိုးလိုက်လေခြင်းလို့ကိုယ့်ကိုကိုယ် သနားနေမိမှာပဲ ။
( က ) စိတ်တိုမိမယ်..၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို အော်ဟစ်ဆူပူရင်း စိတ်ကို ထွက်ပေါက်ပေးမယ် ။
( ခ ) ခဏလေး အနားယူမယ်.။ ဖြစ်နိုင်ရင် စောစောလေး အိပ်ရာဝင်လိုက်မယ် ။
( ဂ ) သေလောက်အောင် ပင်ပန်းနေတာ တစ်ယောက်ယောက်က ကူညီကြပါဦးလားလိူု့အိမ်သားတွေကို
အော်ဟစ် ပြောဆိုလိုက်မယ် ။
၆။ ကိုယ့်ကြောင့် အမှားအယွင်း တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်သွားရင်.....
( က ) ကိုယ်နဲ့ ဆက်နွယ်နေသူတွေကို သူတို့ ကြောင့် ဖြစ်သွားတာလို့အပြစ်ပုံချလိုက်မယ် ။
( ခ ) ၀န်ခံလိုက်မယ်..။ ပြီးတော့ တောင်းပန်လိုက်တာပေါ့ ။
( ဂ ) ကောင်းပြီ..ကိုယ်မှားသွားတယ်..၊ ဒါပေမဲ့ နောက်ထပ် ဒီလို အလုပ်မျိုးကိုခိုင်းဖို့မစဉ်းစားနဲ့ လို့ 
၇။ ရှက်ရွံ့ စရာ တစ်ခုခု ဖြစ်သွားရင်......
( က ) ကိုယ်က လုံးဝ ဂရုမစိုက်လေဟန်ထင်အောင် နေပြလိုက်မယ် ။
( ခ ) အကြောင်းအရာ အဖြစ်အပျက်ကို ရင်ဆိုင်မယ် ။
( ဂ ) ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဘယ်လို မျက်နှာပြရပါ့မလဲလို့ထပ်ပြန်တလဲလဲ တွေးနေမယ်..၊ နောက်ပြီး အဲ့ဒီကိစ္စ
ရပ်ကို သူများတကာတွေက အမြဲတမ်း အမှတ်ရနေတော့မှာပဲလို့ထင်နေမယ်..။
၈။ ကိုယ်က နောက်ကျတဲ့ အခါ......
( က ) ဘယ်သူ့ ကိုမှ ဂရုမစိုက်ဘူး..။
( ခ ) နောက်တစ်ခါ ဒီလိုမဖြစ်အောင် ကြိုးစားသင့်တယ်လို့ဝန်ခံမယ်..။
( ဂ ) ထူးဘာမှာ မဟုတ်လို့မသိသလိုပဲ နေလိုက်တော့မယ်..။
၉။ ခက်ခဲပြီး နေ့ တဓူဝ လုပ်နေရတဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို ကြုံရတဲ့အခါ.....
( က ) တော်ပြီ..နောက်နေ့ မှလို့ရက်ရွှေ့ လိုက်မယ်..။
( ခ ) ချက်ချင်းစပြီး လုပ်မယ် ၊ ဖြည်းဖြည်းလုပ်ရင်း ပြီးစီးသွားအောင် ဆောင်ရွက်မယ် ။
( ဂ ) တွေးကြည့်လိုက်တာနဲ့ တောင်မှ ခက်ခဲတာမို့တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့အကူအညီ ရလိုရငြား မျှော်နေမိမယ် ။
၁၀။ ကိုယ့်လုပ်ငန်းဌာနမှာ တာဝန်တစ်ခုခုကို ( ရုတ်တရက် ) အပေးခံရရင်...
( က ) ကိုယ့်ကိုမှ ရွေးခေါ်ရတယ်လို့ ..တစ်ခြားတစ်ဦးဦးကို ပေးပေါ့လို့ပြောလိုက်မယ်..။
( ခ ) ယုံကြည်အားကိုးလို့တာဝန်ပေးတာမို့ကျေကျေနပ်နပ် ဆောင်ရွက်မယ် ။
( ဂ ) တာဝန်ယူချင်ပေမဲ့ ဖြစ်မယ်မထင်ပါဘူး ဆိုပြီး ဆင်ခြေကောင်းတစ်ခုခု ရှာပြီး ပြောလိုက်မယ် ။
« Last Edit: December 08, 2011, 08:15:36 PM by tunaye2011 »
« Reply #247 on: November 30, 2011, 06:15:56 PM »
မေးခွန်းလေးတွေက ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မေးခွန်းတစ်ခုနဲ့ တစ်ခုကတော့ မချိတ်မိဘုး ဖြစ်နေတယ်။
ဥပမာ- မေးခွန်း ၁၊ ၂ က လူ့အပြုအမူဆိုင်ရာ မေးခွန်းတွေ ဖြစ်နေပေမယ့် မေးခွန်း ၃ နဲ့ ၄ ကတော့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ဆိုင်ရာတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ စိတ်ပညာ မေးခွန်းလွှာတွေမှာ အပြုအမူအတွက်ဆိုရင် မေးခွန်းအားလုံး အပြုအမူဆိုင်ရာတွေချည်း မေးပြီး ရလဒ်ကို ကောက်နုတ်ရပါတယ်။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအတွက်ဆိုလည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဖြေတစ်ခုထဲနဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ကောက်ချက်မချနိုင်လို့ပါပဲ။ (လူဆိုတာ အကောင်းအဆိုးရောနေတာမဟုတ်လား.)
နောက်တစ်ချက်က ဘယ်အချက်တွေနဲ့ ပြည့်ရင် ဘယ်လို ကောက်ချက်ချရမယ်ဆိုတာ ပညာရှင်တွေတောင် ငြင်းခုံကြလို့ စိတ်ပညာ မေးခွန်းလွှာတွေ အမျိုးမျိုး ထွက်ခဲ့တာပါ။
ဒီတော့ကာ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ခြုံငုံ သုံးသပ်ခြင်းငှာ မတတ်သာပေမယ့် ဖြစ်နိုင်တယ့် ကောက်နုတ်ချက်ကလေးတွေကို ရေးသွားပေးပါ့မယ်။
လတ်တလောမှာတော့ ပေါက်ဖော်တို့ရဲ့ မထင်မရှား ပြည်နယ်တစ်ခုမှာ သောင်တင်နေတာကြောင့် ကျောင်းထဲအနိုင်နိုင် ၀င်နေရပါတယ်။ ဒါကြောင့် အလျင်းသင့်သလို ကူညီသွားပါ့မယ်။
« Last Edit: November 30, 2011, 06:30:54 PM by ဒေါက်တာဆိုက်ကို »
« Reply #248 on: November 30, 2011, 07:13:34 PM »
၃။က ၄။က၊ဂ ၅။ဂ ၇။ဂ ၉။ဂ တွေကို ရေးချယ်ထားမိသူတွေဟာ စိတ်ခံစားမှုကြီးသူတွေ မိမိကိုယ်ယုံကြည်မှု နည်းသူတွေ ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် အလေးထားမှုကြီးသူတွေ ဖြစ်နိုင်ချေ မြင့်ပါတယ်။ စိတ်ကျရောဂါ (depressive disorder) စိတ်လှုပ်ရှားမှုရောဂါ(anxiety disorders) တွေ ဖြစ်နိုင်ချေ မြင့်ပါတယ်။
၂။ခ ၃။ဂ ၆။က ၇။က ၈။က တွေကို ရွေးထားသူတွေကတော့ မိမိကိုယ်ကို အထင်ကြီးသူတွေ ဖြစ်နိုင်ချေ မျာါးတယ်။ Narcicissistic ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ရောဂါနဲ့ နီးစပ်နေပါတယ်။
« Reply #249 on: December 12, 2011, 02:42:54 PM »
Quote from: zero0 on March 24, 2011, 03:35:44 PM